Bogga ugu weyn 10 Barnaamijyada Maalgelinta ugu Fiican ee Bilowga ah 2021 -ka
Waa maxay sababta aad ugu baahan tahay App -ka Maalgashiga
Waa Maxay Barnaamijyada Maalgelinta Ugu Fiican ee Bilowga ah?
1. Maalgelinta SoFi
7. Horta hantida
8. Maal -gashade
Lacag intee le'eg ayaan u Dhigaa Maalgelinta?
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Barnaamijyada Maalgelinta ee Bilowga ah
Ahaanshaha maal -gashade cusub ayaa kugu cabsi gelin kara, gaar ahaan haddii aadan garanayn meel aad ka bilowdo. Nasiib wanaag, kororka taleefannada casriga ah iyo barnaamijyada, barashada sida loo maalgashado iyo la socodka maalgelintaada ayaa la fududeeyay iyada oo la heli karo helitaanka barnaamijyada maalgashiga ugu wanaagsan ee bilowga ah.
Waxa kale oo muhiim noqonaysa in wax laga barto barnaamijyada maalgashi ee ugu wanaagsan marka suuqyadu noqdaan kuwo dimuqraadi ah oo la wada heli karo. Marka, haddii aad raadinayso barnaamijyada maalgashiga ugu fiican si ay kaaga caawiyaan sidii aad dhaqaalahaaga dib ugu hanan lahayd, barnaamij maaliyadeed oo wanaagsan ayaa xamili kara hawlaha maaliyadeed ee caadiga ah sida u wareejinta lacagta maalgashiga xisaab iyo dabagalka kharashaadka.
Adeegsiga barnaamijka maalgashiga wuxuu kaa caawinayaa inaad yeelato wacyigelin wanaagsan oo ku saabsan xaaladdaada maaliyadeed. Barnaamijku wuxuu si weyn u caawin karaa raadinta horumarka xagga yoolalka maaliyadeed iyo waxqabadka maalgashiga.
Barnaamijyada maalgashiga ugu fiican ayaa sidoo kale kuu oggolaan kara inaad si dhakhso leh uga ganacsato kaydka, ula socoto koontadaada waqtiga dhabta ah, oo aad wax ka barato suuqyada. Barnaamijyada maalgashiga ayaa caan ku noqday taas oo ay sababtay kala -duwanaanshahooda.
Khadadka dhow ee soo socda, waxaan ku qori doonnaa barnaamijyada maalgashi ee ugu wanaagsan bilowgayaasha.
ARAG SIDOO KALE: 20 Software Tracking Investment ugu Fiican 2021 | Tusaha Khubarada
Waa kuwan qaar ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee abaabulka iyo maalgelinta lacagtaada. Dhammaan barnaamijyadan maalgashiga waxay u fiican yihiin kuwa bilowga ah, waxayna u fududeeyaan kuwa hadda bilaabaya maalgelinta ama doonaya inay ciyaaraan ciyaar kaydinta madadaalada.
Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah barnaamijyada maalgashiga ugu wanaagsan ee bilowga ah:
SoFi Maalgashi, mid ka mid ah barnaamijyada maalgelinta ee ugu sarreeya oo ku habboon adeegsadayaasha dhammaan heerarka xirfadda. Bilowga ayaa si fudud u dooran kara maalgashi otomaatig ah waxayna u oggolaan karaan maalgashadayaasha SoFi inay u dhisaan maalkooda.
Si aad u hesho bilowga gacmaha badan, waxaad sidoo kale ku kala duwanaan kartaa faylalkaaga adoo dooranaya crypto, kaydka, ama lacagaha isweydaarsiga (ETFs). Soo-bandhigyada SoFi ee qiimaha jaban, waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa $ 1 si aad u bilowdo ganacsi adiga oo aan lahayn guddiyo.
Akhri ALSO: Best and Affordable Airline ETF oo sare u kacday sanadka 2021
Fiicnaan waa meel fiican oo laga bilaabo haddii aad rabto barnaamij maalgashi oo kaa caawin doona inaad gaarto yoolalkaaga. Barnaamijkan wuxuu ku habboon yahay kuwa bilowga ah maxaa yeelay wax walba wuxuu ka qabtaa maamulka lacagta si loo maalgeliyo, loo ganacsado, iyo dib -u -dheelitirka faylalka.
Waxa kaliya ee la qabtaa ayaa ah in Betterment ay adiga oo dhan kuu qabato haddii aad diyaar u tahay inaad wax yar bixiso. Waxaad kala dooran kartaa labada qorshe maalgashi: Dijital (0.25 boqolkiiba dheelitirkaaga) iyo Premium (0.25 boqolkiiba dheelitirkaaga) (0.4 boqolkiiba dheelitirkaaga).
Maalgashiga adigoon waxba taaban
Madal leh yool gaar ah
Khidmadaha la -talinta sanad walba (oo leh dheelitirro waaweyn)
Qorshaha ugu sarreeya wuxuu leeyahay dheelitir ugu yar oo sarreeya.
LA XIDHIIDH BADAN: Maareynta Lacagta ee Dhallinta 101: Sida Lacag loogu keydiyo Dhallinyarada 2021 -ka
Haddii aad rabto is -dhexgal siman oo aad iska ilaaliso guddiyada ganacsiga, Roobinimada waa xulasho weyn.
Barnaamijkan maalgashiga ama bilowga ah ayaa kuu oggolaanaya kaydka ganacsiga, ETF -yada, ikhtiyaarrada, iyo cryptocurrency bilaash ah, waxaadna ku awoodi doontaa inaad sidaas ku sameyso iyada oo loo marayo is -dhexgal mobiil oo jilicsan. App -ka la fududeeyay waa fududahay in la isticmaalo, xoogaa ka dib, waxaad ka dhaqaaqi doontaa shaashadda ilaa shaashadda si dareen leh markaad suuqa ka ganacsato. Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah ma jirto talo la heli karo, waa inaad ogaataa waxaad rabto inaad maal gashato.
Bogga saamiyada waxaa laga heli karaa bar raadinta oo ku yaal shaashadda kore, halkaas oo aad ka arki karto jaantusyada iyo tirakoobyada muhiimka ah.
Muuqaal kale oo weyn oo ka mid ah app -ka ayaa ah bixinta degdegga ah ee ugu horreysa $ 1,000 ee lacag kasta oo aad ku shubto koontadaada, taas oo kuu oggolaaneysa inaad isla markiiba bilowdo ganacsiga. Haddii aad xubin ka tahay Robinhood Gold, oo ah darajo sare, waxaad awoodi doontaa inaad samaysato dhigasho degdeg ah ilaa $ 50,000.
Ganacsiga oo aan lahayn guddiyo
Warbixinnada cilmi -baarista
Ma jirto wax shuruud ah oo ah dheelitirka ugu yar.
Ma jiraan 401 (k) xisaab.
Lacagaha wadaagga ah lama hayo.
Si aad wax badan uga ogaato barnaamijkan oo aad u hesho, guji xiriirka hoose:
Acorns waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee noocyada cusub ee barnaamijyada maaliyadeed, laakiin wali waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan sababtoo ah fududeyntiisa adeegsiga.
Ka dib markaad dejiso barnaamijka, uma baahnid inaad fiiro gaar ah siiso. Markaad ku xirato kaarka deynta ama kaarka deynta akoonkaaga, Acorns waxay ku uruurin doontaa iibsiyadaada doolarka ugu dhow waxayna ku maalgelin doontaa farqiga mid ka mid ah dhowr meelood oo ETF ah.
Acorns Lite wuxuu ku kacayaa $ 1 bishii, laakiin shirkaddu waxay kaloo bixisaa adeegyo kale. Haddii aad rabto inaad hormariso, waxaad ku bixin kartaa $ 3 bishii Acorns Personal, kaas oo ku jira Lite.
Heerkani wuxuu bixiyaa koonto hawlgab shaqsiyeed (IRA), kaas oo lagu furi karo mid ka mid ah saddex dariiqo: dhaqan, Roth, ama SEP. Waxaad kaloo wareejin kartaa 401 (k) ama IRA.
On Acorns, waxaad dooran kartaa faylalkaaga ku saleysan waqtiga la qiyaasay ilaa hawlgabka (lagu xisaabiyo da'da 59 12). Tani waxay kuu saamaxaysaa inaad noqotid muxaafid intaad ku dhowdahay da'daas, wakhti laga yaabo inaysan ku habboonayn dhammaan maalgashadayaasha. Heerkan waxaa kale oo ku jira koonto-hubin FDIC-caymis leh oo aan lahayn ajuuro dheeri ah iyo marin u hel kumanaan ATM-yada ah.
Waxa kale oo aad ku dari kartaa Acorns Family, oo ay ku jiraan astaamaha labada heer ee ugu horreeya iyo xisaabaadka maalgashiga carruurta, $ 5 bishii.
Si otomaatig ah isugu dheellitirto faylalkaaga adoo maalgelinaya lacag caddaan ah
Ku kasbato lacag adiga oo wax ka iibsanaya liiska horay loo soo xulay ee magacyada summada.
Khariidad si xeel dheer loo farsameeyay
Ma dhisi kartid faylalkaaga kaliya iyada oo loo marayo khidmadaha billaha ah.
Stockpile waa barnaamij maalgashi oo xiiso leh kaas oo kuu oggolaanaya inaad iibsato saamiyada jajabka ee shirkad. Markaa, haddii aadan haysan $ 300 oo aad ku qarashgareyso hal tiknoolajiyad oo qaali ah, beddelkeed waxaad iibsan kartaa kala bar ama saddex meelood meel. Ma jiraan wax khidmad ganacsi ah Stockpile.
Kaydku wuxuu awood kuu siinayaa inaad bixiso a kaarka hadiyadda dib loogu iibsan karo saamiyada, taas oo noqon karta hab madadaalo leh oo lagu soo bandhigo qof qaraabo ah oo maalgelin ah.
Si aad hadiyad u dirto, xitaa uma baahnid xisaab. Kaydku wuxuu carruurta u oggolaanayaa inay la socdaan maalgashigooda wakhti kasta, waxaadna u abuuri kartaa liistada kaydka la oggolaaday inay ka ganacsadaan. Barnaamijku wuxuu u oggolaanayaa carruurta inay la wadaagaan liiska rabitaanka saamiyada qoyska iyo saaxiibbada.
Webull waxay bixisaa ganacsiga saamiyada onlaynka ah ee komishanka oo aan dabooli karin saacadaha buuxa ee ganacsiga, xigashooyinka suuqa waqtiga-dhabta ah ee kuu saamaxaya inaad ku kala beddesho faylalkaaga oo leh agab dhammaystiran oo ah alaabada maalgashiga oo ay ku jiraan saamiyada, saamiyada jajabka, xulashooyinka, ETFs, iyo ADRs.
Si ka duwan qaar ka mid ah barnaamijyada kale ee maalgashiga, waxaad awoodi doontaa inaad furato koonto la canshuuri karo iyo sidoo kale koonto IRA (dhaqameed, Roth, ama rogid), oo ku siinaya ikhtiyaarka aad ku maareyn karto maaliyaddaada in badan adoo adeegsanaya dillaalkan.
Haddii aad doorbideyso inaad ka ganacsato kombiyuutarkaaga, waxaad ku rakibi kartaa madal Webull oo aad abuuri kartaa liisaska daawashada, arki kartaa jaantusyada saamiyada, oo aad maamuli kartaa maalgelintaada.
Ma jiro guddi ganacsi.
Badeecooyin badan oo maalgashi ayaa la heli karaa.
Ma jiraan wax isweydaarsiga cryptocurrency.
Ma jiraan saamiyo jajab ah.
Wealthfront waa mid ka mid ah kuwa ugu madax -bannaan Lataliyeyaasha Robo, waxayna maamuli kartaa lacagtaada, ha ahaato mid ku jirta koonto canshuur laga qaadi karo ama IRA, lacag yar.
Wealthfront waxay ku dhistaa faylalkaaga ETFs qiimo jaban, iyadoo la tixgelinayo inta ay le'eg tahay khatarta aad rabto inaad qaadato iyo sidoo kale markaad u baahan doonto lacagta. Wealthfront waxay lacag ku dari doontaa faylalkaaga marka aad dhigato, iyadoo koontadaadu ka dhigayso mid dheelitiran oo waddada u socota yoolkaaga.
Lacagta maamulka sanadlaha ah ee Wealthfront waa 0.25 boqolkiiba, taas oo ah heerka warshadaha. Sida laga soo xigtay shirkadda, waa qiimo aad u macquul ah astaamaha la soo bandhigay, oo ay ku jiraan goosashada canshuur-luminta otomaatiga ah, oo si wax ku ool ah u dabooleysa khidmadda sannadlaha ah ee macaamiisha badan.
Wealthfront sidoo kale waxaa ku jira rafcaan maaraynta lacagta koontada (xitaa haddii aadan iska qorin koontada maalgashiga), dulsaarka dulsaarka tartanka, helitaanka goor hore ee jeegagga tooska loo dhigay, iyo kaarka deynta-dhammaantood bilaa lacag bille ah.
Bilowga ayaa ka faa'iideysan doona tan.
Isku -dheelitirnaanta faylalkaaga
Ma jiraan khidmad ganacsi.
Ma jiro ganacsi cryptocurrency.
Waxa ku xiga liiskayaga barnaamijyada maalgashiga ugu wanaagsan ee bilowga ah waa Invstr. Invstr waa waxa aad heshid marka aad iskugu darto barashada, maalgashiga dunida dhabta ah, iyo bulshada barnaamij loogu talagalay inuu maalgashadeyaasha bilowga ah siiyo hab ay ku galaan kaydka, gaar ahaan haddii aad jeceshahay cayaaraha.
Barnaamijku wuxuu isku daraa ciyaarta kaydka khiyaaliga ah oo aad gacan ka geysan karto maareynta $ 200 bilyan oo faylalka faylalka ah oo leh marin u helka fikradaha maalgashadayaasha saamiyada iyo maalgashiyada kale.
Ciyaarta khiyaaliga ah waxay ku siinaysaa $ 1 milyan oo lacag ah, oo waxaad fikrado ka heli kartaa shabakadda bulshada ee app -ka iyo quudinta wararka.
Kuwa ugu sarreeya bisha ayaa sidoo kale ku guuleysta lacag dhab ah. Haddii aad rabto inaad qaar ka mid ah xulashadaada khiyaaliga ah u rogto saamiyada nolosha dhabta ah, barnaamijku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad iibsato jajabyo iyo saami dhan komishan la'aan. Marka adeegsadayaasha cusub furaan oo maalgeliyaan koonto, abka ayaa xitaa siin doona $ 5.
Ma jirto dheelitir ugu yar.
Ma jiraan wax khidmad bille ah.
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka ganacsato cryptocurrencies.
Aaladaha Android lama taageero.
Stash wuxuu kuu oggolaanayaa inaad maalgashato ugu yaraan oo aad ku dallacdo khidmadaha billaha ah ee u dhexeeya $ 1 illaa $ 9 iyadoo ku xiran nooca koontada.
Koontada bilowga ahi waxay kuu oggolaaneysaa inaad maalgashato saamiyada jajabka ah ee hal saamiyo, dammaanad, ama ETF; koontada “koboca” $ 3 bishii waxay u oggolaanaysaa IRA -yada; iyo bixinta weyn ee “Stash+” waxaa ka mid ah baaritaanka suuqa ee billaha ah iyo xisaabaadka maalgelinta haynta carruurta.
Muuqaalkeeda Auto-Stash wuxuu kuu oggolaanayaa inaad dejiso maalgelin joogto ah, oo, sida Acorns, waxay kuu oggolaaneysaa inaad soo ururiso wax iibsiyada oo aad maal gasho farqiga.
Stash wuxuu sameeyaa talooyin maalgashi oo ku saleysan astaanta aad abuurto markaad is -qorto. Sidoo kale waa mid ka mid ah barnaamijyada maalgashi ee ugu fiican haddii aad rabto si fudud wax -barashada dheefshiidka si ay kaaga caawiso hagaajinta xirfadahaaga ganacsi.
Waxay kaloo bixisaa hagitaan shaqsiyeed, caqabado, iyo su'aalo. Waxaa jira xitaa podcast.
Kani waa barnaamij kale oo maalgashi oo wanaagsan oo kaa caawin kara bilowga.
Meelaha maalgashiga fudud oo tooska ah ayaa inta badan si fiican ugu shaqeeya bilowga. Ally Invest waxay ku bixisaa adeeggan barnaamijkeeda moobaylka.
Kaydka iyo ETF -yada ma laha guddiyo; Xirfadaha sanduuqa wadaagga ah waxay leeyihiin $ 9.95 khidmad komishan. Ma jiraan khidmado bille ah ama shuruudaha dheelitirka ugu yar ee laga walwalo.
App -ka Ally, oo sidoo kale adeegsada Bangiga Ally, waa mid fudud oo sahlan in la isticmaalo. Ma laha dawanno iyo foorno badan sida qaar ka mid ah meheradaha ganacsi ee firfircoon, laakiin waxay leedahay wax kasta oo bilowga ah iyo inta ugu badan ee maalgashadayaasha u baahan.
Warka wanaagsan ee maalgashadayaasha cusub ayaa ah inay kaliya qaadato lacag yar si loo bilaabo. Khidmadaha ayaa aad u hooseeya, haddii aysan jirin, oo aad ku bilaabi karto ku dhawaad ​​lacag kasta. Dhab ahaantii, waxa aad ku bilowdo aad bay uga yar tahay tan badbaadintaada iyo edbintaada muddada-dheer.
Furaha guusha maalgashiga muddada-dheer waa in si joogto ah lacag loogu daro. Marka, si aad hanti u urursato, waa inaad ku shubtaa koontada oo aad sii wadataa inaad maal gasho boosaskaaga si joogto ah.
Qaddarka aad si dhab ah u maalgeliso waxaa go'aamiya xaaladdaada dhaqaale iyo baahiyahaaga. Iyo dallaaliinnada iyo barnaamijyadan qiimaha jaban ee maanta ayaa kuu oggolaanaya inaad lacag badan jeebkaaga ku haysato.
Intee lacag ah ayaan u baahan doonaa si aan u bilaabo?
Yaab yar. Waxaad ku bilaabi kartaa faylalka maalgelinta lacag yar-xitaa isbeddelkaaga firaaqada ah-iyada oo ay ugu mahadcelinayaan barnaamijyada maalgelinta yar sida Acorns iyo Stash.
Lacagta aan ku maalgeliyo barnaamijyada maalgashiga ma caymis baa?
Maya. Haddaad lacagtaada suuqa geliso, caymis ma leh, oo waxaad waayi kartaa qaar ama dhammaanteed. Kaydka, curaarta, maaliyadaha wadaagga ah, ETF-yada, xulashooyinka, iyo hantida kale ee suuqa ku saleysan ayaa tusaale u ah. Hantidaan noocyadeeda ah waxay isku bedbeddeshaa waqti ka dib, taas oo macnaheedu yahay inaad lacag badan samayn karto ama lumin karto iyadoo ku xiran hadba sida uu suuqa u wareego.
Haddii aad u baahan tahay hanti aad ammaan u ah, eeg xisaabaadka dammaanadda leh sida koontada keydka ama CD-ga bangiga caymiska FDIC. Xisaabaadyadan waxay ilaaliyaan lacagahaaga illaa $ 250,000 nooc kasta oo koonto iyo bangi kasta.
Waa maxay barnaamijka maalgashiga ugu fiican ee bilowga ah?
Maalgashadayaasha cusub, kuwa soo socda ayaa ah barnaamijyada maalgashi ee ugu wanaagsan adiga: SoFi Invest, Betterment, RobinHood, Acorn, Stockpile, Webull, Wealthfront, Stash, Investr, iyo Ally
Iyada oo caan ku noqoshada barnaamijyada maalgelinta ay sii kordhayso maalinba maalinta ka dambaysa, dadka wax yar ama aan garanayn suuqa maalgelinta samaynta ayaa hadda qaadaya tallaabooyinka ugu horreeya waxayna abuurayaan dalab qalab si ay uga caawiyaan inay maalgeliyaan lacagtooda adag ee ay kasbadaan iyo inay kobciyaan maalkooda.
Ka dib baaris qoto dheer oo ku saabsan barnaamijyada maalgashiga ugu wanaagsan ee bilowga ah, waxaan hadda sheegi karnaa in barnaamijyada maalgashiga ugu wanaagsan ay ka mid yihiin SoFi Invest, Betterment, RobinHood, Acorn, Stockpile, Webull, Wealthfront, Stash, Investr, iyo Ally
bankrate.com - 8 barnaamijyo maalgashi oo ugu wanaagsan Sebtember 2021
mint.intuit.com - 13 -ka Barnaamijyada Maalgelinta ugu Fiican ee Bilowga ah in la isku dayo 2021
softwaretestinghelp.com - 15 Barnaamijyada Maalgelinta ugu Fiican ee Bilowga ah 2021 [Darajooyinka La Cusboonaysiiyay]
30 Barnaamijyo Dakhli oo Dadban si Lacag Loogu Sameeyo Intaad Joogto | 2021
10 Xayiraadaha Xayeysiinta Bilaashka ah ee Ugu Fiican Bilawga 2021